Ekrem amomamoğlu: Kanal İstanbulဆောက်လုပ်ရေးစီမံကိန်း? | RayHaber | raillynews
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီMarmara ဒေသကြီး34 အစ္စတန်ဘူလ်Ekrem amomamoğlu: Kanal İstanbulဆောက်လုပ်ရေးစီမံကိန်း?
11 / 12 / 2019 34 အစ္စတန်ဘူလ်, အထွေထွေ, ရုပ်သံလိုင်းအစ္စတန်ဘူလ်, လမ်းမကြီး, ခေါင်းစီးသတင်း, Marmara ဒေသကြီး, တူရကီ
Istanbul Metropolitan Municipality မှမြို့တော်ဝန် Ekrem amomamoğluသည် ၅၆၄ နှစ်မြောက် Tersane-i Amire kuruluşတွင်ကျင်းပသောÇalışရေတပ်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွင်ပြောကြားခဲ့သည်။ “ Kanal Istanbul” စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးသူ၏ထင်မြင်ချက်ကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားပြီး Imamoglu က“ ကျွန်တော့်ဘဝမှာစကားမပြောနိုင်လောက်အောင်မကောင်းဆိုးဝါးတခါမှမဖြစ်ဖူးဘူး။ စကားပြော, bro ။ လူတစ်ယောက်ကကျွန်တော့်ကိုစည်းရုံးသိမ်းသွင်းလို့မရဘူး။ သိပ္ပံပညာနှင့်ဆင်ခြင်တုံတရားကကျွန်ုပ်ကိုယုံကြည်စေပါလိမ့်မည်။ ငါသိပ္ပံနှင့်အကြောင်းပြချက်မုသာမသုံးသောဘာမှမလိုက်ဘူး။ ငါတို့နိုင်ငံကမသွားဘူး” ဟုသူကပြောသည်။ amomamoğluသည် Kanal Istanbul ရှိငှားရမ်းခနှင့်ဆက်စပ်မှုကိုဤစကားများဖြင့်ဥပမာပေးခဲ့သည်။ ၎င်းသည် Marmara ရှိကျွန်း ၃ ကျွန်း၏စီမံကိန်းဖြစ်သည်။ Bakirkoy, Avcilar သည်Büyükçekmece 564 ကျွန်းများ၏ရှေ့တွင်တည်ရှိလိမ့်မည်။ ငါထပ်ပြော ဦး မလား။ BİMTAŞသည်ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီတွင်တည်ရှိသည်။ စီမံကိန်းများကိုလေ့လာထားပြီး၊ ကျွန်းများပေါ်တွင်ဗီလာများကိုထားရှိသည်၊ ထိုရွာများနှင့်ပြုလုပ်ထားသောစီမံကိန်းများကိုဥရောပပြပွဲနှင့်နိုင်ငံတကာပြပွဲများတွင်မိတ်ဆက်ပြီးမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။ ဒါဟာဘာလဲ? အဲဒီကျွန်းတွေဆီကိုဒေါ်လာ ၂-၃ သန်းနဲ့ရောင်းမယ်။ အစ္စတန်ဘူလ်၏လိုအပ်ချက်များကိုကြည့်ပါ
Isters Metropolitan Municipality (IMM) သည်“ Tersane-i Amire kuruluş” ၏ ၅၆၄ နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်တွင်“ ရေတပ်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ” ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ City Lines Inc. အထွေထွေညွှန်ကြားမှု ဦး စီးဌာနမှစီစဉ်သောHaliçသင်္ဘောကျင်းတွင်ပြုလုပ်သောအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွင်ကဏ္ the ၏သက်ဆိုင်သူအားလုံးပါ ၀ င်သည်။ ပထမဆုံးမိန့်ခွန်းကိုŞehirHatları A.Ş. အထွေထွေမန်နေဂျာ Sinem Dedetaş Dedetaşİmamoğluသည်မိုက်ခရိုဖုန်းကိုယူသည်။ အခမ်းအနားကျင်းပရာHaliçသင်္ဘောကျင်း၏အရေးပါမှုကိုmamoğluမှပြောကြားခဲ့သည်မှာနှစ်နှစ်ကြာအောင်ပွဲခံပြီးနောက် Fatih Sultan Mehmet ကရှေးဟောင်းအစ္စတန်ဘူလ်ကိုဆောင်ခဲ့သောအလုပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ တစ်ဖန်ကျွန်ုပ်တို့သည်သူ့ကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြန်ပြောပြသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် ၅၆၄ နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့တွင်နေထိုင်သော Golden Horn သင်္ဘောကျင်းတွင်ရှိသည်။ ငါတို့ဟာကမ္ဘာပေါ်မှာသက်တမ်းအရင့်ဆုံးသောသင်္ဘောကျင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်၊
“ Bosphorus သည်ကမ္ဘာ၏အကြီးမားဆုံးသောကောင်းချီးတစ်ခုဖြစ်သည်”
သူ၏မိန့်ခွန်းတွင်အစ္စတန်ဘူလ်၏ရေကြောင်းသမိုင်းကိုဥပမာ ပေး၍ İမားမိုဂလီကHaliçသင်္ဘောကျင်းတွင်ယခုအချိန်အထိအလုပ်လုပ်ခဲ့ကြသူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ amomamoğluကပြောကြားခဲ့သည်ဒီမှာ ucu; Hayriye ကူးတို့ဖြင့်ခရီးသည် ၁၈ သန်းကျော်သယ်ယူပို့ဆောင်နိုင်သည့်ကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။ ဒီကိန်းဂဏန်းကအစ္စတန်ဘူလ်မှာရေကြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဟာအမြဲအရေးကြီးတယ်ဆိုတာပြသထားတယ် Bosphorus အားကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးမားဆုံးသောကောင်းကျိုးများအဖြစ်ဖော်ပြသည်İmamoğluက“ Bosphorus သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အစ္စတန်ဘူလ်တွင်သဘာဝနှင့်ပထဝီအနေအထားအရသာထပ်မံပေါင်းစည်းရုံတင်မကပင်လယ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်များစွာအကျိုးရှိသည်။ တံတားများတည်ဆောက်ပြီးမှပင် ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်တွင်ရေကြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသည်မြို့ပြသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတွင်သိသာသောအခန်းကဏ္,တွင်ရှိပြီး ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းသာရှိသည်။ ယနေ့နှုန်းသည် ၄ ​​ရာခိုင်နှုန်းအထိနိမ့်သည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်ယနေ့ပျမ်းမျှအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏နိုင်ငံသား ၈၀၀၀၀၀ ခန့်သာပင်လယ်ခရီးဖြင့်သွားလိုကြသည်။ ဒီနယ်ပယ်မှာတိုးတက်မှုမရှိတာ ၂၅ နှစ်ရှိခဲ့ပြီ။ ဒါပေမယ့်ကျဆင်းသွားတယ်။ အခုကျွန်တော်တို့ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းထပ်မံရောက်ရှိဖို့ရည်မှန်းချက်ကိုချမှတ်လိုက်ပြီ၊ ရှေ့ကိုတက်နေတယ်။ ”
Imamoğluကအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံအနေဖြင့်ပြင်းထန်သောယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုကြောင့်ပင်လယ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်လုံလောက်မှုမရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ “ Karaköyဥမင်လိုဏ်ခေါင်းသည်ဤမြို့တော်တွင်အကောင်အထည်ဖော်မည်ဖြစ်သည်။ သို့သော်အခြားတစ်ဖက်တွင်မူလူပေါင်း ၁၆ သန်းကိုဆက်သွယ်မည့်မြေအောက်ရထားကွန်ယက်ကိုကျွန်ုပ်တို့မဆက်သွယ်နိုင်ပါ။ ဟုတ်ပါတယ်, လျစ်လျူရှုနှင့် misinvestments ဤအချက်ရောက်ရှိအပေါ်ကြီးမားသောသက်ရောက်မှုရှိသည်။ ဒါပေမယ့်အရေးအကြီးဆုံးကတော့၊ အကယ်၍ လူသားတွေကိုယာဉ်များထက် ဦး စားပေးရင်ငါတို့ကအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမှာအဆင့်မြင့်လိမ့်မယ်။ “ ဒီကနေ့မြန်ဆန်တဲ့၊ စိတ်ချရတဲ့၊ သက်သောင့်သက်သာရှိပြီးဈေးသက်သာပြီးအများပြည်သူသုံးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်ကိုတည်ထောင်ဖို့ငါတို့ကြိုးစားနေတယ်İmamomamoğluကပြောပါတယ်။ ဤသို့ပြုလုပ်ရန်နည်းလမ်းမှာအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်စနစ်တစ်ခုလုံးကိုပေါင်းစည်းခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ ဘတ်စ်ကား၊ မက်ထရို၊ လမ်းရထားနှင့်ရေကြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုပိုမိုကျယ်ပြန့်သောဘောင်တွင်ပေါင်းစည်းရမည် ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်တတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအားလုံးကိုဆောင်ရွက်ရပါမည်
K သည်ငါ Channel ISTANBUL AN ၏တိုးတက်မှုကိုငြင်းဆန်
“ Channel Istanbul ၏ပြdiscussedနာကိုလည်းဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်” ဟုİmamoğluမှပြောကြားခဲ့သည်။ “ နိုင်ငံသား Ekrem Imamoglu ကကလေးသုံးယောက်ဖခင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော့်ကို Channel Istanbul မှာမထားစေချင်ဘူး။ ဒါအရေးကြီးတယ် ကျနော်တို့ပြောနေသည့်ဘာသာရပ်သည် Istanbul ကိုလုံးဝပြောင်းမည့်အခြားနေရာတစ်ခုသို့သယ်ဆောင်သွားမည့်ဘာသာရပ်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်အစ္စတန်ဘူလ်နိုင်ငံသားများ၏စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်လိုအပ်ချက်ကိုအပြည့်အဝဆွေးနွေးသင့်သည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲကတိအဖြစ်တင်ဆက်ခဲ့သောစီမံကိန်းကိုအများပြည်သူသိရှိနိုင်ရန်နှင့်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းမဖော်ပြထားသည်ကိုကျွန်ုပ်မြင်တွေ့ခဲ့ရသည်။ ကြည့်ပါ၊ ဒါကစည်းကြပ်မှုပါ ငါကစီးပွားရေးသမားတစ်ယောက်ပါ၊ ၇၅ ဘီလီယံလို့ကျွန်တော်မထင်ဘူး၊ ဒါကဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေထက်အများကြီးပိုပါတယ်။ ဇန်နဝါရီလပထမပတ်ကို Kanal Istanbul Workshop တွင်ကျင်းပမည်ဖြစ်သည်။ သင်အစ္စတန်ဘူလ်ရှိခြေလှမ်းတိုင်းကိုကောင်းစွာသတိရသင့်သည်။ ငါထင်ပါတယ်, အစ္စတန်ဘူလ်၏ပထဝီဝင်ထိုကဲ့သို့သောပြောင်းလဲမှုသည်းမခံနိုင်။ ဒါဟာသိပ္ပံနည်းကျအကြောင်းပြချက်ရှိပါတယ် ..
စတုရန်းမီတာ ၁၃၅ သန်း ၁၃၅ မီလီယံသာစိုက်ပျိုးမြေသည်တစ်ခုတည်းသောတရားမျှတမှုရှိကြောင်း Imamoglu မှသတိပေးပြောကြားခဲ့သည်။ “ Marmara ၏ပင်လယ်နက်အပေါ်သက်ရောက်မှု ... ကျွန်း ၈ နိုင်ငံတွင်နေထိုင်သူ ၈ သန်း၏အခြေအနေ ... ဘာလဲ။ အရှည်မီတာ ၈၀၀ မှ ၃၅၀ အထိရှည်လျားသောတံတားများနှင့်သင်ဆက်သွယ်နိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်နည်း ကပြောသည် နည်းပညာတိုးတက်မှု၏ရလဒ်အဖြစ်သင်္ဘောအသွားအလာတိုးလာခြင်း၊ သင်္ဘောအရွယ်အစားများပြားလာခြင်းနှင့် Bosphorus မှတစ်ဆင့်လောင်စာကဲ့သို့အန္တရာယ်ရှိသောအဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေသည့်အရာဝတ္ထုများသယ်ဆောင်လာသည့်သင်္ဘောများဖြတ်သန်းခြင်းကိုတားဆီးနိုင်သည်။ သင်အကြောင်းပြချက်ကိုကြည့်နိုင်ပါသလား? ၉၀ ရာနှုန်းမှာမမှန်ကန်ပါ။ Bosphorus ကိုဖြတ်သန်းသွားသောသင်္ဘောအရေအတွက်မှာလျော့နည်းနေသည်။ ဒီရေအကြောင်းပြချက်ကြောင့်နှစ် ၁၀၀၀၀ သက်တမ်းရှိပထဝီအနေအထားကိုဤကဲ့သို့သောအရာများဖြင့်ဖြိုခွဲလိုက်ခြင်းဖြင့်သူတို့သည် EIA အစီရင်ခံစာကိုဖတ်စရာမလိုဘဲတူးမြောင်းတဝိုက်တွင်လူ ဦး ရေ ၁ သန်း ၁၅၀ ၀ န်းကျင်ရှိသည်။ သငျသညျ, ရေနံတင်သင်္ဘော, သင်္ဘော? အသစ်ငှားရမ်းစီမံကိန်းလား အခန်း၏အဆိုအရ ၁.၅ ဘီလီယံကုဗမီတာနီးပါးတူးဖော်မှုကုဗမီတာ ၂ ဘီလျံရှိသည်။ အစ္စတန်ဘူလ်အတွက်ရေလက်ကြားကိုဖြတ်ကူးသောသင်္ဘောအရေအတွက်, တူရကီလျော့နည်းစေပါသည်။ သူကရေနံတင်သင်္ဘောခြိမ်းခြောက်မှုအကြောင်းပြောနေတာပါ။ ရေနံပိုက်လိုင်းများတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများမည်မျှအရေးပါသည်ကိုသိသာထင်ရှားသည်။ မတူညီတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလုပ်နိုင်ပါတယ်။
Imamoglu ကနှစ်ပေါင်း ၁၀,၀၀၀ ၏လှပသောပထဝီဝင်အနေအထားကိုရေဖြင့်ဆင်ခြေ ပေး၍ ချိုးဖဲ့ရန်ကြိုးစားနေသည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ göre EIA အစီရင်ခံစာအရသူတို့သည်စာဖတ်ခြင်းမရှိဘဲကျွန်ုပ်တို့ရှေ့သို့လာခြင်းဖြစ်သည်။ ငါပြောနေတာမဟုတ်ဘူးပြည်သူ့နှင့်မြို့ပြ ၀ န်ကြီးဌာန။ လူ ဦး ရေ ၁ သန်း ၁၅၀,၀၀၀ ကိုရုပ်သံလိုင်းပတ် ၀ န်းကျင်တွင်ဖန်တီးထားသည်။ ခင်ဗျားတို့သိတယ်၊ ၁ သန်း ၁၅၀,၀၀၀ ပြောမယ်၊ အဲဒါ ၂ သန်းဖြစ်မယ်။ မင်းကောင်းကောင်းသိတယ် ဒီစီမံကိန်းကဘာလဲ။ ရေနံတင်သင်္ဘော, သင်္ဘော။ ဒါဆိုဒါကငှားရမ်းစီမံကိန်းအသစ်လား။ ၁.၅ ဘီလီယံကုဗမီတာတူးဖော်ရေးအခန်းများအရပင်လယ်နက်၌ဖြည့်စွက်ရမည့် ၂ ဘီလီယံအခန်းများအရသိရသည်။ ငါသည်သူတို့၏စီမံကိန်းများကိုဇန်နဝါရီလအတွင်းပြသပါလိမ့်မယ်။ ပထမ ဦး ဆုံးဘာလဲသိလား ၎င်းသည် Marmara ရှိကျွန်း ၃ ကျွန်း၏စီမံကိန်းဖြစ်သည်။ Bakirkoy, Avcilar သည်Büyükçekmece 10 ကျွန်းများ၏ရှေ့တွင်တည်ရှိလိမ့်မည်။ ငါထပ်ပြော ဦး မလား။ BİMTAŞသည်ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီတွင်တည်ရှိသည်။ စီမံကိန်းများကိုလေ့လာထားပြီး၊ ကျွန်းများပေါ်တွင်ဗီလာများကိုထားရှိသည်၊ ထိုရွာများနှင့်ပြုလုပ်ထားသောစီမံကိန်းများကိုဥရောပပြပွဲနှင့်နိုင်ငံတကာပြပွဲများတွင်မိတ်ဆက်ပြီးမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။ ဒါဟာဘာလဲ? အဲဒီကျွန်းတွေဆီကိုဒေါ်လာ ၂-၃ သန်းနဲ့ရောင်းမယ်။ အစ္စတန်ဘူလ်၏လိုအပ်ချက်ကိုကြည့်ပါ။ အိုကေ၊ ဒီကောင်ကဒူဘိုင်းမှာလုပ်လို့ရတယ်။ သဲကန္တာရ၊ နိုငျပါသညျ။ ၎င်းသည်ဘုရားသခင်ထံမှကောင်းချီးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါကိုမထိနဲ့၊ ငါတို့မတို့ပါ။ ထိုကဲ့သို့သောအရာမရှိပါ လူတွေရဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုပြောကြတယ်။ ကျွန်တော့်ဘဝမှာစကားမပြောနိုင်တဲ့မာရ်နတ်တစ်ခါမှမရှိခဲ့ဖူးဘူး။ စကားပြော, bro ။ သိပ္ပံပညာသည်ကျွန်ုပ်အားအကြောင်းပြချက်ဖြင့်စည်းရုံးသိမ်းသွင်းလိမ့်မည်။ လူတစ်ယောက်ကကျွန်တော့်ကိုစည်းရုံးသိမ်းသွင်းလို့မရဘူး။ သိပ္ပံပညာနှင့်ဆင်ခြင်တုံတရားကကျွန်ုပ်ကိုယုံကြည်စေပါလိမ့်မည်။ သိပ္ပံပညာနဲ့ဆင်ခြင်တုံတရားကမယုံကြည်တဲ့အရာတွေကိုငါမလိုက်တော့ဘူး။ ငါတို့လူမျိုးကမသွားဘူး ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်မှုနှင့်သိပ္ပံပညာကိုလိုက်နာခြင်းကသင့်အားမှန်ကန်သောလမ်းကြောင်းမှသီးခြားမထားပါ။ ဒါပေမယ့်သင်ကလူတစ်ယောက်နောက်ကိုလိုက်လျှင်၊ လူသား, ငါဆိုလို, ငါကအခြားသူတစ် ဦး အပါအဝင်အပါအဝင်ငါပါဝင်ပတ်သက်တယ်။ ဤအမှု၌, ဒီနိုင်ငံရေးကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး။ တစ်စုံတစ် ဦး ကတောင်းသောကြောင့်ဤသည်မှာပြanနာမဟုတ်ပါ။ တစ်စုံတစ် ဦး ကမလိုချင်။ ဖြစ်သောကြောင့်ပြanနာမဟုတ်ပါ။ ဤသည်ဆင်ခြင်တုံတရားနှင့်သိပ္ပံပညာတို့၏လုပ်ရပ်ဖြစ်သည်။
အစ္စတန်ဘူလ် Bursa Izmir အဝေးပြေးစီမံကိန်းအိမ်ရာကြော်ငြာ whack ခဲ့သည်
အစ္စလာမ္မဂူမှအီဘိုဂန်သို့တုန့်ပြန်မှုလမ်းကြောင်း - လူ ၁၆ သန်းကိုမသိသောသူတစ်ယောက်မျှမရှိပါ
Kanal İstanbulဆောက်လုပ်ရေးစီမံကိန်း Mi